Club 72 | AFAA Partners' Council
01 AFAA Club 72 Diamond Level $20,000
The AFAA Club 72 Diamond Level is an investment in the future of the fire alarm industry though support of AFAA code development participation and delivery of high quality training and educational programs.
02 AFAA Club 72 Emerald Level $15,000
The AFAA Club 72 Emerald Level is an investment in the future of the fire alarm industry though support of AFAA code development participation and delivery of high quality training and educational programs.
03 AFAA Club 72 Sapphire Level $10,000
The AFAA Club 72 Sapphire Level is an investment in the future of the fire alarm industry though support of AFAA code development participation and delivery of high quality training and educational programs.
04 AFAA Club 72 Platinum Level $5,000
The AFAA Club 72 Small Business Level is an investment in the future of the fire alarm industry though support of AFAA code development participation and delivery of high quality training and educational programs.
05 AFAA Club 72 Gold Level $2,500
The AFAA Club 72 Gold Level is an investment in the future of the fire alarm industry though support of AFAA code development participation and delivery of high quality training and educational programs.